ညီနေမင်း: မွေးနေ့ကို ဘာ့ကြောင့် လုပ်ကြသလဲ
ဒီနေ့ ကျွန်တော့်မွေးနေ့ဆိုတော့ မွေးနေ့နဲ့ ပက်သတ်တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းတော့ ပြေပြချင်ပါတယ် . မွေးနေ့ကို ဘာလို့ လူတွေက နှစ်တိုင်းလုပ်သလဲဆိုရင် အချက်နှစ်ချက် ရှိပါတယ် .
(၂) မိမိကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည့် မိခင် အသက်နဲ့ရင်းပြီး မွေးခဲ့တဲ့ ရက်ကို အမှတ်ရစေဖို့ အတွက်ပါ .
ဒီလိုနေ့တွေမှာ မိဘနားမှာနေပြီး မိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားသင့်ပါတယ် . တစ်ချို့က မွေးနေ့ဆိုတာကို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ သဘောမျိုး ထားကြတာ မှားပါတယ် . မိဘကို သတိမရဘဲ ဘီယာသောက် အရက်သောက် မူးပြီး အိပ်၊ အဲ့လိုမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး . အားလုံးပဲ မိဘနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေရ တဲ့သူများ မိဘတန်ဖိုးကို သိတတ်ပါစေ နားလည်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် . မိဘရင်ခွင်ထဲမှာ နေချင်ပေမယ့် ဘ၀တိုက်ပွဲအတွက် တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာ သွားရောက်ပြီး လုပ်ကိုင်နေရပေမယ့် အချိန်တိုင်း မိဘနှစ်ပါးကို သတိရနေတာပါ .
Posted by ညီနေမင်း at 12:35 AM
soezaw December 13, 2009 at 12:56 AM
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။ လေးစားပါတယ်။
Myo Win Zaw December 13, 2009 at 2:30 AM
ဂျပန်ကောင်လေး December 13, 2009 at 2:39 AM
အစ်ကိုရေ.. ဟက်ပီးဘဒ်ဒေးပါ... အစ်ကို့စာတွေ အမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...း))
ဝေလင်း December 13, 2009 at 2:51 AM
မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်ကို။ အစ်ကိုပြောတာမှန်ပါတယ်။ မွေးနေ့မှာ သတိရသင့်ဆုံးက အမေပါ။
thawzin December 13, 2009 at 3:18 AM
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မွေးနေ့ရှင်တိုင်း သိထားမယ်ဆိုရင် တော်တော်ကောင်းမှာပဲ။ အစ်ကိုရဲ့မွေးနေ့မှာ ဒီအသိလေးအတွက် သာဓုခေါ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လတိုင်း၊ အပတ်တိုင်း၊ နေ့တိုင်း၊ နာရီတိုင်း၊ စက္ကန့်တိုင်း သိလိုက်ရင်တော့ အကောင်းတကာအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် မွေးနေ့ရက်ကို မှတ်တောင် မမှတ်ထားဘူး။ သိတော့ သိပါတယ်။ မွေးနေ့ကျမှပဲ ရက်ကောင်းသလိုလိုနဲ့ နေ့တိုင်းက ကျန်းမာရေးကောင်းရင် ကောင်းနေတာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် သေဖို့တော့ မေ့နေချင်ပါသေးတယ်
naitar December 13, 2009 at 3:31 AM
"* (၁) မိမိသေရမည့် ရက်နီးလာတာကို အမှတ်ရစေဖို့
* (၂) မိမိကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည့် မိခင် အသက်နဲ့ရင်းပြီး မွေးခဲ့တဲ့ ရက်ကို အမှတ်ရစေဖို့ အတွက်ပါ . " တဲ့မှတ်သားသွားပါသှ်
နေ့အိပ်မက် December 13, 2009 at 3:45 AM
မွေးနေ့မှာတင် မဟုတ်ဘဲ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ စိတ်လိုလက်ရ လုပ်နိုင်ပါစေ...
lifestop December 13, 2009 at 4:50 AM
ကိုနေမင်းက ကျွန်တော့်ဆ၇ာပါပဲ။ ဆ၇ာကျန်းမာစွာဖြင့်
အောင်မြင်ပါစေလို့ မွေးနေ့မှာ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
Aung Naing Soe December 13, 2009 at 6:06 AM
ကိုညီနေမင်း ခင်ျော။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေူ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ူကျွန်တော်က အကို့ရဲတပည့်တစ်ဦးပါ။ မှန်တယ်ဗျာ မွေးနေ့မနက်မှာမိဘနှစ်ပါးကို ထိုင်ကန်တော့ရတဲ့ပီတီ ကဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးလေ။ HAPPY BIRTHDAY PAR
dreamhunter December 13, 2009 at 6:35 AM
ဟယ်လိုhappy birthday ပါဗျာ
chit December 13, 2009 at 10:47 AM
လိုအင်ဆန္ဒ အားလုံး ပြည့်စုံပါစေ
အဲလာ December 13, 2009 at 11:26 AM
Happy Birthday ကိုညီ
စံလှိုင် December 13, 2009 at 12:35 PM
ကိုညီနေမင်း ခုကျရောက်တဲ့မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း
များစွာတိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ မွေးနေ့ဆုလာတောင်း
ပေးတာတောင် နောက်ကျလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး ဟီးးးဟီးး
ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကိုယ့်ထက်ဦးတဲ့သူတွေရှိသွားလို့ :P မွေးနေ့
မှာ ကိုယ်စိတ်ထဲကအတိုင်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ
yu December 13, 2009 at 12:48 PM
ပေးဆပ်သူ December 13, 2009 at 6:09 PM
a tree December 13, 2009 at 6:15 PM
Mr Nyi,Everyday isanew beginning.But today is very special,It's yr birthday,and that's what makes this day!all the more beautiful.As you celebrate yr special day.May all yr wishes come truth !Happy Birthday to you.
La Wawm December 13, 2009 at 6:31 PM
pretty December 13, 2009 at 6:56 PM
အစ်ကိုရေ အစ်ကို့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေါ့။ ဆရာတော်ဦးဇောတိက ရဲ့ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန် သဘောထားမှန်ပါစေ စာအုပ်ထဲက စာသားလေးတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်
သင့် ဘ၀မှာ အဓိကအကျဆုံး၊ ခြေခံစိတ်အကျဆုံး၊ အချက်အခြာအကျဆုံး လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့၊ ကိုယ့်မှာ အရည်အချင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲက အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့။
ကြည်လင်ရွှင်လန်းတဲ့သူ၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ သင့်မှာ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ကြည်လင်ရွှင်လန်းတဲ့သူ၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ တာဝန်လည်းရှိပါတယ်။
စိတ် ချမ်းသာ ၊ ကိုယ် ကျန်းမာပါစေ
blinkblank.guy2 December 13, 2009 at 7:32 PM
Happy Birthday ဖြစ်ပါစေ ကိုညီ။
မောင်မိုး December 13, 2009 at 7:34 PM
Happy Birthday ပါ ကိုညီ။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
Yee December 13, 2009 at 7:49 PM
မွေးနေ့မှာ မွေးမိခင်မွေးဖခင်တို့ကို လေးစားသတိရနေယုံနဲ့ တာဝန်မကြေပါဘူး။
မိမိတတ်စွမ်းသလောက်နဲ့ သတိတရ အမှတ်ရ ကန်တော့ကြပါလို့။
မောင်ဘကြိုင် December 13, 2009 at 8:55 PM
Aung Soe December 13, 2009 at 10:02 PM
မနေ့ က ရုံးပိတ်ရက်မို့ကိုညီနေမင်းမွေးနေ့ မသိလိုက်လို့ဟက်ပီးဘဒ်ဒေး ....
နေ့ တိုင်း ပို့စ်အသစ်လေးတွေစောင့်ဖတ်နေသလို
နေ့ တိုင်းလဲ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်
ကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ အများအကျိုးကိုဒီထက်ပိုလို့ ဆောင်နိုင်ပါစေ
neking December 13, 2009 at 10:34 PM
waihunoung December 13, 2009 at 11:26 PM
ကျွန်တော် ဝေဟင်အောင် မေတ္တာပို့သခဲ့ပါတယ်။
အနမ်း December 14, 2009 at 9:14 AM
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်တည်းပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။ မွေးနေ့ကိုတစ်ရက်နောက်ကျသွားတယ်။ မွေးနေ့အတွက်ပိုစ့်လေးကောင်းပါတယ်။ မွေးနေ့တိုင်းမှာ ကိုယ့်မိခင်ကိုအထူးကန်တော့ပန်းဆင်ကာ၊ ပျော်ရွှင်အောင်
ထားရမယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။
win December 14, 2009 at 10:40 AM
May you be life long, Ko Nyi Nay Min.
layeik December 14, 2009 at 11:02 AM
Happy Birthday ပါအကို..........။
မွေးနေ့ မှစနောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင်ပျော်ရွင်ပါစေ....။
လိုအင်ဆန္ဒတွေလဲပြည့်ဝပါစေလို့ လရိပ် ဆုတောင်းပေးပါတယ် အကို.......။
alniko December 15, 2009 at 3:48 AM
မွေးနေ့ရက်မရောက်ခင် အဲဒီအသိလေး မျှဝေပေးတဲ့
tin December 15, 2009 at 8:01 AM
မွေးနေ့အကြောင်းလေးဖတ်ရတာ ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရတယ်ဗျာ၊ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ၊ လေးစားလျက်ပါ...